ဒေါက်တာအောင်စိုးဝင်း ပြောသော ရဲယိုသီး ဆေးဖက်၀င်မှုများ – Wun Yan
ဒေါက်တာအောင်စိုးဝင်း ပြောသော ရဲယိုသီး ဆေးဖက်၀င်မှုများ
မေး။ ရဲယိုကဆေးလား ?
ဖြေ။ ရဲယိုသည် ဆေးမဟုတ်ပါ။ ဆေးထက် အဆင့်များစွာ မြင့်မားပြီး သဘာဝ အလေ့ကျ ပေါက်ရောက်သော အသီးတစ်မျိုးပါ ။
မေး။ ရဲယိုသီးကို ဘာရောဂါမှ မဖြစ်သေးခင် ကြိုတင် စားလို့ရပါသလား ?
ဖြေ။ စားလို့ရပါတယ် ။ ထန်းလျက်နဲ့သော်၄င်း ၊ ပျားရည်နဲ့သော် ၄င်း ၊ ရောပြီးစားလို့ရပါတယ်။ အစေ့ တွေကိုမစားစေချင်ပါ ၊ အူအတက်မှာ သွားပိတ်နေမှာ စိုးလို့ပါ ။ အသီးတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အများကြီးပါ ။အဲ့အထဲကမှ ရဲယိုသီးကို ရွေးချယ်ပြီးထုတ်လုပ် ရသလဲဆိုတော့ ရဲယိုက ကင်ဆာပျောက်တဲ့ ထိပ်တန်းအသီး ၃၀၀ ထဲမှာ ရဲယိုသီးကTOP TEN ထဲမှာပါလို့ ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် ။
မေး။ ရဲယိုသီးအမှည့်ကို ဘယ်အချိန်မျိုးမှာ စားသုံးသင့်ပါသလဲ?
ဖြေ။ အစာအိမ်ထဲမှာ အစာမရှိချိန်တွင် စားသင့်ပါတယ် ။ ပြီးရင် ရေများများ သောက်လိုက်သင့်ပါတယ် ။ တစ်နေ့ကို ၃ ကြိမ် စားပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်က ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းတွေ အရမ်းလွှမ်းမိုးနေလို့ လူ့သွေးထဲမှာ ဓာတုပစ္စည်းတွေ နေ့စဉ် ဝင်ရောက်နေလို့ပါ ။ ရဲယိုသီးအမှည့်ကိုစားပြီးရင် အနည်းဆုံး နာရီဝက် (သို့ ) တစ်နာရီ နေပြီးမှအစာ စားသင့်ပါတယ် ။
ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည် ကျွဲရိုင်း ကိုကာကိုလာ တွေကို ရဲယိုသီးနှင့် ကပ်ပြီး မစားသင့်ပါ ။ ရဲယိုအာနိသင် ကျမှာ စိုးလို့ပါ ။ မတည့်တဲ့သဘောတော့ မရှိပါဘူး ။
မေး။ ဘယ်လို ရောဂါတွေအတွက် သင့်တော်ပါသလဲ?
ဖြေ။ ရောဂါ ၁၀၁ မျိုးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ကင်ဆာ ၊ ဆီးချို သွေးတိုး ၊ဘလေဖြတ်ခြင်း ၊ လေးဘက်နာ /ဂေါက်၊ ထိပ်ကပ်နာ/နှာခေါင်း အနံ့မရခြင်း ၊ နားအကြားအာရုံကျဆင်းခြင်း၊ ကျီးပေါင်း/အရိုးပွခြင်း ၊ သားအိမ်အလုံးတည်ခြင်း၊ သားဥအိမ်ရေအိတ်တည်ခြင်း ၊ အဖြူဆင်းခြင်း ၊ ရေယုန် ကြွက်နို့ပေါက်ခြင်း ၊ ပန်းသေ/ပန်းညိုးခြင်း ၊ ဆေးလိပ်စွဲ ကွမ်းစွဲ အရက်ဘီယာစွဲခြင်း ၊ဖြတ်လိုသူများ သောက်သင့်ပါသည် ။
မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း ၊ အိပ်ဆေးစွဲခြင်း ၊ အိပ်မပျော်ခြင်း ၊ စောစောအိပ်ရာမဝင်နိုင်ခြင်း ၊ သည်းခြေအိတ်ကျောက်တည် ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်း၊ အသည်းအဆီဖုံးခြင်း ၊ ပါးစပ်ပျက်ခြင်း ၊ ထိပ်ပြောင်သူများ ဆံပင်ပြန်ပေါက်ခြင်း ၊ အသားအရေ စိုပြေချောမွေ့ခြင်း၊ ပါးစပ်နံခြင်း၊ ချိုင်းနံခြင်း ၊ ရာသီမမှန်ခြင်း၊ ရာသီလာခါနီး လူသတ်ချင်စိတ်ပေါ်ခြင်း ၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း ၊ အထီးကျန်ဆန်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျလွယ်ခြင်း ၊ အများနှင့်လိုက်လျောညီထွေ မနေနိုင်ခြင်း ၊ တခုခုဆို မှတ်မရခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ ၊ အသည်းရောဂါ ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ၊ မုန့်ချိုအိတ်ရောဂါ ၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း ရောဂါများ ၊ ဆီးကျိတ်ရောဂါ ၊ မြုံခြင်း ၊ မှတ်ဥာဏ်မကောင်းခြင်း ၊ စာကျက်သည့်အခါ အာရုံမရခြင်း၊ ဆိုးသွမ်းလူငယ်ဖြစ်နေခြင်း ၊ သူငယ်ပြန်ခြင်း ၊ အယ်လ်ဆိုင်းမားရောဂါ ၊ အဝလွန်ခြင်း ၊ သက်လုံကောင်းလိုသူများ ၊ ကိုယ်ခံအားကောင်းလိုသူများ ၊ အသက်ရှည်ကျန်းမာလိုသူများ နေ့စဉ်မှန်မှန် သောက်သုံးသင့်ပါသည် ။
(သဘာဝ စွမ်းအားရဲယို ဆရာဝန်)
← မီးတွင်းထဲမှာ မိခင် ဆုံးသွားတာကြောင့် မိဘမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ ကလေး သုံးယောက်ကို မွေးစားမယ့် ခိုင်နှင်းဝေ
ကြက်သွန်ဖြူ အခွံတွေကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ →